Maxaa ka jiraa warar sheegaaya in Gudoomiyaha Ciidamada Madaniga Degmada Afgooye la geeyey xabsi ku yaala Magaalada Mogadishu. – idalenews.com
Maxaa ka jiraa warar sheegaaya in Gudoomiyaha Ciidamada Madaniga Degmada Afgooye la geeyey xabsi ku yaala Magaalada Mogadishu.
Iyada oo dhowaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose uu ka dhacdey isku dhac ciidan oo u dhaxeeyey ciidamada madaniga degmada Afgooye ee ay dadku sameysteen iyo ciidamo ku lebisanaa dareeska dowlada Soomaaliya ayaa waxa uu dagaalkaasi sababtey dhimasho iyo caawo soo kala gaara labada dhinac.
Isku dhacaasi ayaa yimid ku gedaal markii askari ka tirsanaa ciidamada dowlada Soomaaliya dhac iyo boob u geystey dad shacab degmada Afgooye, hase ahaatee waxa ku raad baxey Ciidamada madaniga ee xaafadaha kala gedisan ee degmada Afgooye oo isku dayey inay qabtaan askarigaas ka dibna dilay askarigii falka xun geystey oo iksu day inuu ciidamada madaniga degmada dagaal kala hortago.
Waxa goobtii soo gaarey ciidamada militiriga dowlada soomaaliya, kuwaasi oo sida la sheegey ku heeb ahaayeen askariga la diley.
Haddaba waxa labo todobaad ka hor xabsiga degmada Afgooye la dhigey, goomiyaha ciidamada madaniga ee degmada Afgooye oo lagu magacaao Liibaan Abuukar(Yuu-Yuu) , kaasi oo loo haysto in mid ka mid ah ilaaladiisa dilka askariga gaystay.
Wararku waxa ay sheegayaan in gudoomiye Liibaan Abuukar (yuuyuu) loo wareejiyey CID-da magaalada Mogadishu, taasoo aad uga careysiisay dadka deegaanka Afgooye, kuwaasoo haatan iyaguna dhankooda bilaabey abaabul ka dhan ah maleeshiyo beeleedkii afduubka u gaystey Liibaan Abuukar. Waxaana sioo kale dadka deegaanka ee taageesan gudoomiyaha ciidamada deegaanka Afgooye sheegeen in maleeshiyada labisan dareeska ciidanka ku qasbaan in ay isaga huleelaan degmada isla markaasna xoog u adeegsadaan sii daynta gudoomiyaha ciidamada madaniga xaafadaha degmada Afgooye.
Ugu dambeynti Degmada afgooye ayaa ka dhacey falal isku jiro Dhac, boob kufsi iyo hanjabaadyo ,ka dib markii ay la wareegeen ciidamada dowlada soomaaliya.
Daawo: Shir Jaraa’id oo Beelaha Koonfur Galbeed ku qabteen magaalada Baydhabo…
Deg Deg: Abdiweli Sheekh Axmed oo maanta loo magacaabaaya Ra’iisul Wasaaraha Somalia